४१ हजार बढिले बुझे ४ अर्ब कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी, सरकारले ५० करोड बेहोर्नु पर्ने - नेपालबहस
४१ हजार बढिले बुझे ४ अर्ब कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी, सरकारले ५० करोड बेहोर्नु पर्ने
१० फागुण २०७७ | १२:०९:०५ मा प्रकाशित
१० फागुन, काठमाडौं । हालसम्म ४१ हजार जनाले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी बुझेका छन् । फागुन पहिलो सातासम्म ४१ हजारले चार अर्ब रुपैयाँ बढि बुझेका छन् ।
बीमा समितिका अनुसार काजगपत्र पुरा गरेका ४१ हजार २६१ जनाले ४ अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानीका लागि स्वीकृति पाएका हुन्। समितिले ४ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिए पनि बीमितले भने पाउन सकेका छैनन्।
तर दाबी भुक्तानीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँको स्वीकृति भैसकेको छ। बाँकी ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ। तर समितिले अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकार सँग समन्वय गरेको छैन। मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ।
फागुन ७ गतेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ परिसकेको छ। अर्को तर्फ कोरोना बीमाको दाबी पर्ने क्रम रोकिएको छैन।
पुषमा कस्तो रह्यो सरकारको आम्दानी ? १ महिना पहिले
सरकारले संचालनमा ल्यायो नागरिक एप, यस्तो सेवा पाइने ? १ महिना पहिले
समायोजनले ३७ विद्यालय विलीन २ महिना पहिले
विराटनगर आँखा उपचारको केन्द्र बन्दै २ महिना पहिले
गृहले गर्‍यो ५२ जना सीडीओहरुको सरुवा, काे-कहाँ ? १५ घण्टा पहिले
लैंगिक उत्तरदायी अनुसन्धान तथा संचारका सीप प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न १९ घण्टा पहिले
कांग्रेसको ढुलमुले प्रबृत्ति र ओलीका गिद्धे आँखा २ हप्ता पहिले
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको ८.८५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव ३ दिन पहिले
साताको शेयर बजार : साढे १८ अर्बको कारोवार १२ महिना पहिले
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ५१० जना पक्राउ, २४२ गाडी नियन्त्रणमा ६ महिना पहिले
सीपको अभावमा रोजगारी पाउन मुस्किल : एक वर्षमा ८४ हजारलाई तालीम १२ महिना पहिले
पूर्व अमेरिकी नागरिकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय ३ महिना पहिले